मधेसमा पितृसत्ताको झिल्का – | Nepaliasmita:: For Latest Nepal news and updates
दाइजो छोरीलाई दिने भनिए पनि त्यसमाथि उसको अधिकार हुँदैन । दाइजोको ठाउँमा उसलाई पैतृक सम्पत्तिमा उसको भागमा आउने अंश दिए हुन्छ । मुख्य समस्या भनेको असमानता हो । क्षमता अभिवृद्धिको अवसर, साधन–स्रोतमाथिको पहुँच र शक्ति बाँडफाँडबीचको असमानता । समान क्षमता भएका केटा र केटीबीच विवाह हुन्छ भने हिंसाको सम्भावना न्यून रहन्छ । एउटा महिला पटक–पटक हिंसा सहन बाध्य हुन्छिन् भने त्यसको कारण परनिर्भरता नै हो । जाने त कहाँ जाने ? बाँच्ने त कसरी बाँच्ने ? जस्ता प्रश्नको जवाफ जबसम्म मधेसका छोरीसँग हुँदैन, तबसम्म मधेसमा सुनिताहरू मारिनु सामान्य भइरहन्छ । (स्रोत : नयाँ पत्रिका)